Tonga daholo ry Bemainty | mandimby maharo
Tonga daholo ry Bemainty	Posted on 16 October 2012 by Mandimby Maharo	Tonga tamin’ny alahady 14 oktobra lasa teo ihany ny iraka avy amin’ny Sadc tarihin’i Leonardo Simao. Araka izay efa voalaza tamin’ny herinandro tokony nahatongavan’izy ireto ireo dia hanao tombana ny mety ho firoson’ny fanatanterahana ny tondrozotra izy ireo. Raha nihaona tamin’ny mpanao gazety izy ireo omaly 15 oktobra taorian’ny nihaonany tamin’ny lehiben’ny diplaomasia malagasy dia nilaza mazava fa tsy azo ovana io tondrozotra io fa ny fanatanterahana azy manaraka ny tokony ho izy ny tsy maintsy atao. Mbola mitohy hatrany moa ny fitetezan’ireto delegasiona ireto ireo nanao sonia iny taratasy iny. Inoana fa amin’ny fotoana hialany eto Madagasikara izy ireo vao afaka hanambara ny vokatry ny tombana nataony.
Fa tonga io omaly alatsinainy io koa ireo miaramila avy ao amin’ny Sadc. 18 lahy sy 2 vavy moa ireto manamboninahitra ambony avy amin’ny firenena samy hafa ireto. Hanao tombana ny fandriampahalemana sy ny filaminana ary ny fitoniana eto izy ireo. Io tombana io dia araka ilay efa voafaritra tamin’ny fihaonana farany tany Maputo. Efa manakaiky rahateo ilay fetr’andro 60 nilazana fa hanaovana izany tombana izany. Hijanona 5 ando eto Madagasikara izy ireo raha ny baiko azony ka hihaona amin’ireo tompon’andraikitra rehetra mety hisahana ny fandriampahalemana eto.
Ireo tombana roa izay ataon’ny Sadc eto ireo dia atao indrindra hijerena raha fotoana izao hodian’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ingahy Simao aloha dia nanamafy fa tsy tokony hisy fanakanan ny olom-pirenena iray hody any amin’ny tanindrazany. Ireo manamboninahitra malagasy kosa nefa vao tsy ela izay no nilaza ampahibemaso fa tsy mety ny fampidirana io filoha teo aloha io eto satria hiteraka korontana izany. Hevitra izay itambarany amin’ireo avy ao amin’ny Fat sy ireo mpanao pomlitika mpiara dia aminy.
Ny datin’ny 18 oktobra aloha no voalaza fa mety hodian’ity filoha teo aloha ity ka samy miandry ny rehetra. Ny resaka mandeha amin’izao koa efa tsy takatry ny valalabemandry intsony fa efa any ambony any amin’ny mpanao politika any.
Tags: Leonardo Simao, marc ravalomanana, Miaramila, politique, SimaoCategories: Actralité, politique
One thought on “Tonga daholo ry Bemainty”	Pingback: FAT, miomana hivadika Davida | mandimby maharo Leave a Reply Cancel reply	Enter your comment here...